Ulonwabo lwaseMzantsi Fargo
wamkelekile eMzantsi Fargo Ulonwabo!
Indlu epholileyo kunye nepropathi, zininzi izinto ezizodwa, yijonge, awufuni kuphoswa yile!
I-rambler enkulu i-twinhome iqaqambe kakhulu kwaye ichwayitile inokukhanya kwelanga okuninzi kwendalo. Ixabiso elidwelisiweyo lelamagumbi ama-4 kunye neendawo zokuhlambela ezi-3. Ukuba ujonge nje i-1 okanye i-2 yokulala ngosuku lweveki undazise kwaye ndiyakwazi ukuhlengahlengisa ixabiso lolo seto ngokunjalo.
Le yeyona ndawo ndihlala kuyo xa ingahlali zindwendwe. Uya kufumana izinto ezimbalwa zomntu ochukumisayo kwindlu yonke, khangela imifanekiso ukuze ufumane ingcamango yokuseta kunye nokuhlelwa, ngaloo ndlela akukho nto imangalisayo xa uthatha isigqibo sokubhukisha :-).
Ihlaziywe ngokutsha kwaye ilungele ukuba ungene kwaye wonwabe bonke ubutofotofo bekhaya nokunye. Uya kufumana okuninzi okongeziweyo, kubandakanya iinketho ezininzi zekofu ukusuka kwi-singleserve ukuya kwimbiza epheleleyo, kunye nesikhululo se-waffle, i-oveni ye-pizza, umatshini we-Movie Theatre popcorn, i-Xbox One, kunye netafile ye-fooseball.
Kukho irempu egaraji yokungena endlwini kungenjalo kukho izinyuko nje ezimbalwa kumnyango wangaphambili. Indawo yam ikwikona enkulu eneyadi entle yemidlalo yangaphandle kunye nedesika enkulu entle eneendawo ezininzi zokuphumla kunye nokonwabisa.
Kwidesika kukho indawo yomlilo yepropane kunye ne-Napoleon Grill eyakhelweyo kunye ne-Pit Boss ye-pellet grill yokutshisa iinkuni ukuze ufumane amava amangalisayo okugcoba.
Amagumbi okuhlala aphezulu kunye nasezantsi ane-HDTV ye-intshi engama-55 kunye nesandi seTheatre. INetflix, iimuvi eziphambili zeAmazon, iDisney +, kunye neHBO Max zonke ziyafumaneka ukuba uzibukele.
Uya kuba nokufikelela kumagumbi okulala ama-2 kunye neebhafu ezi-2 kwinqanaba eliphambili kunye namagumbi okulala ama-2 kunye nebhafu enye ezantsi. Amagumbi okuhlala ama-2, amagumbi amabini okutyela, ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokuhlamba impahla kunye negumbi lokudlala.
Cwangcisa imihla yakho kwaye ndikubone kungekudala!
Akukho maqela. Akutshaywa. Akukho zilwanyana zasekhaya. ENKS!
Intliziyo yaseMazantsi eFargo ngqo ukusuka kwi-32nd Avenue eMazantsi kwaye ikufutshane nommandla wokufikelela ngokulula naphi na kwindawo yaseFargo. Imizuzu emihlanu ukusuka kwisibhedlele sase-Essentia kunye nemizuzu eli-10 ukusuka kwisibhedlele esitsha saseSanford. Kufuphi neScheels Arena kunye neebhari ezininzi kunye neeresityu.
Andizubakho ngexesha lokuhlala kwakho, kodwa ungasoloko undibhalela ukuba kukho into evelayo.